Farqiga u dhexeeya telefoonka xiran iyo xidhin waa mid aad u fudud. Laakiin nasiib daro, dhowr qof ayaa weli ma fahmin dhibcood qaar ka buug xeerka. Bal aan eegno qaar ka mid ah dhinacyada muhiim in la fahmo farqiga u dhexeeya iPhone qufulan iyo xidhin oo ay la socdaan nidaamka in lagu furo qalabka sida si fiican.
Maxaad users rabto in lagu furo ay iPhone?
Users rabto in lagu furo iPhone si ay gelin kara SIM cusub oo ay isticmaalaan telefoonka kula shabakad ee ay doorteen ka dib soo celinta telefoonka ee Lugood.
Sida loo furo iPhone ka shabakadaha mobile kala duwan?
Inta badan sidayaal ah waxaad codsan lahaa wixii macluumaad ah ee qaar ka mid ah. Sidaas, waxaa lagu talinayaa in ay hubiyaan in aad ku ogaataan Tirada account la xiriira ka iPhone, ay tirada mobile, tirada qalab ee IMEI, password ee koontada, iyo afar nambar ee ugu danbeyso ee SSN account haysta ee. Ka hor inta ibo aad iPhone, dib-up for isku abuuro ka dibna raaci doonaa habraaca ku ibo aad side ee.
AT & T saamaxaya kuwa isticmaala iPhone in aad xirtid telefoonada si ay loo isticmaali karaa shabakadaha kala duwan. Qalabka wuxuu ka walaacsan in la quful karaa haddii aan la diiwaan-gashan sida lumay ama la xaday, ama aan la soo wariyay oo qayb ka ah waxqabad kasta oo been abuur ah. Xaaladdan haddii iPhone in la quful waa weli in xilliga heshiiska ay, user ku yeelan doontaa in ay bixiyaan lacagaha joojinta hore to cancel isaga / iyada heshiis hor furo qalabka. Kaliya milkiilaha diiwaan gashan qalabka codsan kartaa code Unlock.
In-case haddii iPhone waa lacag-as-aad-tago telefoonka, qalabka waa in si firfircoon ee shabakadda ugu-yaraan lix bilood ka hor furo. Macaamiisha post-bixiyo, xisaabta la xidhiidha telefoonka waa in si firfircoon iyo lixdan maalmood, iyo lacagta bil kasta inta this waa in la sameeyaa waqtiga.
Xitaa haddii aadan AT & T macaamiisha, laakiin aad soo iibsatay iPhone shabaqa la shabakada, waxaad buuxin kartaa foomka codsiga-up Unlock online AT & T ee. Rep shirkadda ayaa heli doonaa dib in aad laba maalmood oo shaqo gudahood.
Shabakadda mobile soo diro mobile-xaqiijin Unlock via email kiisaska intooda badan, oo macaamiisha u oggolaanaya inay tagaan shan sidani oo sanad kasta. AT & T ee khabiir ayaa sidoo kale kugu hagi doona habka loo furo telefoonka.
Siyaasadda furo T-Mobile waa ku dhowaad mid ah in AT & T ee siyaasadda. IPhone ayaa ka walaacsan tahay in la shabaqa la T-Mobile, waana in aan lagu sheegay sida lumay ama la xaday. The xisaabta iyo tirada mobile ee qalabka macruufka walaacsan waa in heer wanaagsan ah. Plus, iPhone waa in sidoo kale noqon firfircoon ee network muddo ka badan 60 cisho.
Mar kale, user ma yeelan doonaan in ay bixiso wixii qarashka code Unlock mobile phone haddii ay tahay qandaraaskiisa. Laakiin haddii telefoonka waa in heshiis, user ku bixin lahayd lacagta joojinta qandaraaska iyo lacagaha kale ee ay khuseyso ee xisaabta.
Nasiib darro, shirkada ma aqbasho codsi code Unlock online. Waxaad u baahan tahay wac shirkada iyo codsato isku mid. Shabakadda kaliya ogol yahay in laba sidani oo loogu talagalay macaamiisha kasta oo sanad kasta. Geedi socodka in lagu furo lug leedahay galinta SIM cusub firfircoon ee booska SIM iyo isku xira qalabka si Lugood via PC. Ma jiro wax u werwero, sida adeegga macaamiisha sharixi lahaa nidaamka oo dhan si aad u.
Shabakadda waxay marka quful dhan Apple iPhone 4s 4 iyo telefoonada si users u isticmaali kartaa iyadoo network kasta taleefanka gacanta GSM adduunka sameeyey headlines inta lagu jiro February ee sanadkan. Nasiib wanaag, dhammaan qalabka 4G LTE ee shabakaddan waa in hab xidhin, sidaas, haddii aad u buuxiyaan shuruudo gaar ah, waxaad si fudud u boodi kartaa shabakad kale oo aad dukaamada Verizon. Xeerarka ku dhowaad isku mid yihiin. Xisaabta la xidhiidha qalabka waa in aan qabto wax biilasha laalan. Telefoonkan waa in aanay noqon in heshiis, iyo haddii qalabka uu maalgeliyay Edge Verizon, oo dhan qaybood waa in la waayay.
Verizon soo jeedisay, dhammaan taleefanada ay shabaqa in nidaamka kaliya intii lagu guda jiray laba iyo toban bilood ee ugu horeeya ka iibka. Later, users isticmaali kartaa "000000 ama 123456" iyo furid ay telefoonka. Network wuxuu isticmaalaa technology CDMA, laakiin inta badan telefoonada ay leeyihiin boos SIM. Sidaas, waxay sidoo kale loo isticmaali karaa shabakadaha kale ka dib markii furo.
Ilaa hadda sida mobiilka iPhone ama qaran ku tilmaamay ka walaacsanahay, iPhone, kuwaas oo ma noqon karo xidhin oo loo isticmaalo shabakadaha kale ee telefoonka. Sidaas darted, haddii aad qorshaynaysid in ay soo iibsato qaran ku tilmaamay iPhone, inaad si fiican u laba jeer qabaa.
Ma loo baahan yahay in lagu furo iPhone?
Sida horay loo sheegay, haddii aad rabto in aad isticmaasho AT & T iPhone shabag kale, waxaad u baahan tahay in lagu furo iPhone si aad gelin kara side kale ee SIM oo isticmaalo shabakadda.
Phone quful hubaal noqon karaan qaar waxtar leh haddii aad inta badan u safraan dibada. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad isticmaasho iPhone shabag GSM kasta oo dunida.
Ma sharci baa in lagu furo iPhone?
Haa, waa sharci in lagu furo iPhone haddii aad muraadkaaga oo dhan dhammaan shuruudaha shirku u qaaday. Waxaa jira dhowr websites xisbiga saddexaad iyo barnaamijyadooda in lagu furo kartaa iPhone oo aan helin wax code furo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu talinayaa in ay ka fogaadaan waxyaabaha sida. Had iyo jeer lagu furo qalab adiga oo isticmaalaya habka xaq u gudbiyo network isgaarsiinta qalab ee.
5 siyaabo inay muusikada inay iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo Unlock iPhone si loo isticmaali karaa SIM Card kasta